Asidra Amino, L-Cystine, L-Cysteine ​​- Boyu
Hebei Boyu Biotechnology CO., Ltd. dia miorina ao amin'ny Xinle Industrial Park, faritanin'i Hebei, orinasa mpamokatra loharanon-karena ho an'ny vokatra asidra amine.
Ny vokatra lehibe: L-Cystine, L-Cysteine, L-Cysteine ​​HCL Monohidrat / Anhydrous, N-Acetyl-L-Cysteine, S-Carboxymethyl-L-Cysteine, L-Leucine, N-Acetyl-L-Leucine, N- Acetyl-DL-Leucine, L-Tyrosine, N-Acetyl-L-Tyrosine, asidra N-Acetyl-thiazolidine-4-carboxylic (Folcisteine) (CAS NO .: 5025-82-1), L-Argine, L-Arginine HCL, L-LysineHCL, Glycine ary zezika amino asidra amono rano. be mpampiasa amin'ny sehatry ny fanafody, sakafo, vokatra ara-pahasalamana, sakafo ary zezika.
Lany ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, fanamarinana HALAL.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny 8 septambra 2015 ary napetraka tamin'ny 13 jolay 2016. Orinasa teknolojia avo lenta maoderina miorina amin'ny R&D ary tarihin'ny fampandrosoana maharitra.
212021 / Jun
Ny tantaran'ny asidra amine
1.Ny nahitana asidra amine Ny fiandohan'ny asidra amine dia nanomboka tany Frantsa tamin'ny 1806, rehefa nosarahan'ny mpahay simia Louis Nicolas Vauquelin sy Pierre Jean Robiquet ny fitambarana singa iray amin'ny asparagus (fantatra amin'ny anarana hoe asparagine), dia ny asidra amina voalohany no hita. Ary io zavatra hita io dia nampifoha ny scie ...
Ny anjara asan'ny asidra amine
1.Ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana ny proteinina ao amin'ny vatana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny asidra amine: satria ny singa mahavelona voalohany ao amin'ny vatana, ny proteinina dia manana anjara toerana miharihary amin'ny sakafo ara-tsakafo, nefa tsy azo ampiasaina mivantana amin'ny vatana. Izy io dia ampiasaina amin'ny famadihana molekiola asidra amine kely. 2. milalaova ny andraikitra o ...
Ampidiro ny asidra amino
Inona ny asidra amine? Ny asidra amino dia singa fototra izay mandrafitra ny proteinina, ary fitambarana voajanahary izay atômônôma ao amin'ny ataona karbônika amin'ny asidra karboksilika dia soloin'ny vondrona amino. Ny asidra amino dia afaka mamolavola proteinina ao anaty sela, ary koa akora misy amina toy ny ...